Fisavana fiara eny an-dalana Tsy foana fa niantona, hoy ny pôlisim-pirenena
Lozam-pifamoivoizana RN7 Vehivavy bevohoka sy lehilahy iray maty tsy tra-drano
Fito no naratra mafy, lehilahy iray sy renim-pianakaviana bevohoka miaraka amin’ny zanany tao an-kibony no maty tsy tra-drano vokatry ny lozam-piarakodia 3 km tsy hiditra an’ny “Camp Robin” amin’ny lalana ihazo an’ny Fianarantsoa.
Na dia voaresaka tao anatin’ny filàn-kevitry ny ministra ny 29 febroary lasa teo ny fampiatoana ny asa fisavana lava hataon’ireo pôlisy misahana ny fifamoivoizana ireo fiara mandalo dia nambaran’ny kaomisera divizioneran’ny pôlisy Razafimanantena Herivelo Ralaimonjo Edouard fa tsy foana tanteraka izany fa niantona fotsiny.
Afaka misintona ny taratasy fahazoan-dalan’ny mpamily ny pôlisy misahana ny fifamoivoizana raha ny nambarany fa ilay fisavana tsy amin’antoka kosa no tsy hatao intsony. Mba ho fanatevenana ny traikefan’ireo pôlisim-pirenena sy ho fanamafisana ny ady hatao amin’ny kolikoly ary dia pôlisy miisa 120 no nomena fiofanana teny Antanimora nanomboka omaly. Haharitra 20 andro izany ka anisan’ny hanofanana azy ireo manokana ireo karazana tsy fanarahan-dalàna mety hataon’ny fiara sy ny môtô ary ny bisikileta eny an-dalana rehetra eny.